Askar lagu xukumay Jowhar - Caasimada Online
Home Warar Askar lagu xukumay Jowhar
Askar lagu xukumay Jowhar
Afar askari oo ka tirsan ciidamada dowlada Soomaaliya ee ku sugan magaalada Jowhar ayaa xukuno kala duwan lagu riday ka dib markii eedeymo loosoo jeediyay askartaasi.
Masuuliyiin ka tirsan maxkamada ciidamada qalabka sida uu maanta gaaray magaalada Jowhar ayaa fuliyay xukunka oo isugu jiray dil iyo xabsi.
Liibaan Cali Yarow,gudoomiyaha Maxkamada ciidamada qalabka sidda ee dowlada Soomaaliya oo ku sugnaa magaalada Jowhar ayaa sheegay in maxkamada ay dhagaysatay dhamaan eedeymaha loo jeediyay askartaasi,waxaana ka mid ahaa eedeymaha dil iyo dhac ay askarta geysteen.
Cabdi Faarax Xasan Maxamed,ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu maalmo ka hor dil ka geystay magaalada Jowhar,waxaana Liibaan Cali Yarow uu ku dhawaaqay in la dilayo maxkamadana ay ku xukuntay dil toogasho ah,waxaana maxkamada ay la wareegtay qorigiisii.
Sidoo kale askari magaciisa lagu soo koobay Xuseen Tarmuus ayaa lagu xukumay 5 sano oo xarig ah,sida uu aqriyay Liibaan Cali Yarow.